लूका ७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
७ मानिसहरू उहाँको कुरा सुनिरहेका थिए अनि जब उहाँले आफ्नो सबै कुरा भनिसक्नुभयो, तब उहाँ कफर्नहुम पस्नुभयो। २ त्यहाँ एक जना सैनिक अफिसरको* प्रिय दास सिकिस्त बिरामी भएर मर्नै आँटेको थियो। ३ जब ती सैनिक अफिसरले येशूको विषयमा सुने, तब तिनले यहूदीहरूका धर्म-गुरुहरूलाई उहाँकहाँ पठाए र आफूकहाँ आएर आफ्नो दासलाई बचाइदिन बिन्ती गर्न लगाए। ४ तब येशूकहाँ आएका ती मानिसहरूले यसो भन्दै उहाँलाई बिन्तीभाउ गर्न थाले: “तिनी तपाईंको मदत पाउन लायकका छन्‌, ५ किनकि तिनी हाम्रो जातिलाई प्रेम गर्छन्‌ र हाम्रो लागि तिनले नै सभाघर बनाइदिएका हुन्‌।” ६ त्यसैले येशू तिनीहरूसित जानुभयो। तर उहाँ तिनको घरनजिकै पुग्नुहुँदा ती सैनिक अफिसरले आफ्ना साथीहरूमार्फत यस्तो खबर पठाइसकेका थिए: “प्रभु, कष्ट नगर्नुहोस्, किनकि तपाईंलाई मेरो घरमा स्वागत गर्न लायकको म छैनँ। ७ यसैकारण मैले आफूलाई तपाईंकहाँ आउन योग्यको ठानिनँ। बरु एक वचन बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको होस्। ८ किनकि म आफै पनि कसैको अधीनमा बसेको मानिस हुँ अनि मेरो मुनि पनि सिपाहीहरू छन्‌। म एक जनालाई भन्छु, ‘जाऊ!’ र ऊ जान्छ अनि अर्कोलाई भन्छु, ‘आऊ!’ र ऊ आउँछ अनि मेरो दासलाई भन्छु, ‘यो गर!’ र उसले त्यो गर्छ।” ९ जब येशूले यो कुरा सुन्नुभयो, तब तिनीदेखि आश्चर्यचकित हुनुभयो र आफूलाई पछ्याउँदै आइरहेको भीडतिर फर्केर भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई भन्छु, मैले उसको जस्तो ठूलो विश्वास इस्राएलमा समेत पाइनँ।” १० अनि तिनले पठाएका मानिसहरू घर फर्कंदा त्यस दासलाई निको भइसकेको पाए। ११ त्यसपछि उहाँ नाइन नामको सहरतिर जानुभयो अनि उहाँका चेलाहरू र एउटा ठूलो भीड पनि उहाँसँगै यात्रा गर्दै थिए। १२ जब उहाँ सहरको मूलढोका नजिक पुग्नुभयो, तब हेर, एक जना मानिसको लास लगिंदै थियो। ऊ विधवाको एक मात्र छोरा थियो। अनि सहरबाट आएको ठूलो भीड पनि ती विधवाको साथमा थियो। १३ तब तिनलाई देखेर प्रभु टिठाउनुभयो र भन्नुभयो: “नरोऊ।” १४ त्यसपछि नजिक गएर उहाँले अर्थी छुनुभयो र त्यो बोक्नेहरू टक्क अडिए अनि उहाँले भन्नुभयो: “ए युवक, म तिमीलाई भन्छु, उठ!” १५ तब मरिसकेको त्यो मानिस उठेर बस्यो र बोल्न थाल्यो अनि उहाँले उसलाई आमाको जिम्मा लगाउनुभयो। १६ तब तिनीहरू सबैलाई डरले छोप्यो र यसो भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न थाले: “हाम्रो बीचमा एक जना महान्‌ भविष्यवक्ता खडा हुनुभएको छ” र “परमेश्वरले आफ्ना जनहरूतर्फ ध्यान दिनुभएको छ।” १७ अनि उहाँको विषयको यो खबर सारा यहूदिया र वरपरका सबै इलाकामा फैलियो। १८ तब यूहन्नाका चेलाहरूले यी सबै कुराको विषयमा तिनलाई खबर गरे। १९ त्यसैले यूहन्नाले आफ्ना दुई जना चेलालाई बोलाए अनि यो सोध्न प्रभुकहाँ पठाए: “आउनेवाला तपाईं नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको बाटो हेरौं?” २० उहाँकहाँ पुगेपछि तिनीहरूले भने: “बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाले हामीलाई यो सोध्न पठाउनुभएको छ, ‘आउनेवाला तपाईं नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको बाटो हेरौं?’ ” २१ त्यति नै बेला उहाँले बिरामीहरू, पीडादायी रोग लागेकाहरू अनि दुष्ट स्वर्गदूतले सताइएकाहरूमध्ये धेरैलाई निको पार्नुभयो र थुप्रै अन्धालाई पनि दृष्टि दिनुभयो। २२ यसकारण उहाँले ती दुई जनालाई यसो भन्नुभयो: “जाओ र तिमीहरूले जे देख्यौ अनि सुन्यौ, त्यो यूहन्नालाई बताइदेओ: अन्धाहरूले देख्न थालेका छन्‌, लङ्गडाहरू हिंड्न थालेका छन्‌, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध भएका छन्‌, बहिराहरूले सुन्न थालेका छन्‌, मरेकाहरू जीवित भएका छन्‌ अनि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइँदैछ। २३ त्यो मानिस आनन्दित हो, जसले मेरो कारण ठेस खाएको छैन।” २४ यूहन्नाका सन्देशवाहकहरू गइसकेपछि उहाँले भीडलाई यूहन्नाको विषयमा यसो भन्न लाग्नुभयो: “तिमीहरू के हेर्न उजाडस्थानमा गयौ? हावाले यताउता हल्लाइरहेको नर्कट हेर्न? २५ त्यसोभए के हेर्न गयौ त? मिहिन कपडाको लुगा लगाएको मानिसलाई हेर्न? त्यस्तो भव्य लुगा लगाउने अनि विलासी जीवन बिताउनेहरू त दरबारमा हुन्छन्‌। २६ तिमीहरू के हेर्न गयौ, लौ साँच्चै भन त? भविष्यवक्तालाई हेर्न? हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, भविष्यवक्ताभन्दा पनि महान्‌ व्यक्तिलाई हेर्न। २७ तिनी उनै हुन्‌, जसको विषयमा यस्तो लेखिएको छ: ‘हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि-अघि पठाउँदैछु र तिनले तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन्‌!’ २८ म तिमीहरूलाई भन्छु, यूहन्नाभन्दा ठूलो अहिलेसम्म कोही जन्मेको छैन; तैपनि परमेश्वरको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ, त्यो तिनीभन्दा ठूलो हो।” २९ (जब सबै मानिसहरूले र कर उठाउनेहरूले यो कुरा सुने, तब तिनीहरूले परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ भनी स्वीकारे, किनकि तिनीहरूको बप्तिस्मा यूहन्नाबाट भएको थियो। ३० तर तिनीबाट बप्तिस्मा नभएका फरिसीहरू र व्यवस्थामा पोख्त मानिसहरूले भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको सल्लाह बेवास्ता गरे।) ३१ “यस पुस्ताका मानिसहरूलाई म कोसित तुलना गरूँ अनि तिनीहरू कोजस्ता छन्‌? ३२ तिनीहरू त बजारमा बस्ने ती साना केटाकेटीहरूजस्तै छन्‌, जो एक-अर्कासित यसो भन्दै कराउँछन्‌: ‘हामीले तिमीहरूको लागि बाँसुरी बजायौं तर तिमीहरू नाचेनौ; हामीले विलाप-गीत गायौं तर तिमीहरू रोएनौ।’ ३३ त्यसैगरि, बप्तिस्मा गराउने यूहन्ना अरूहरूले जस्तो न खान्छन्‌ न पिउँछन्‌, तैपनि तिमीहरू यसो भन्छौ: ‘उसमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ।’ ३४ मानिसको छोराचाहिं अरूहरूले जस्तै खान्छ र पिउँछ, तैपनि तिमीहरू यसो भन्छौ: ‘हेर, घिचुवा र पियक्कड मानिस! कर उठाउने र पापीहरूको साथी!’ ३५ तर मानिसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम गर्ने असल कामैले ऊ बुद्धिमान्‌ हो भनेर प्रमाणित गर्छ।” ३६ तब एक जना फरिसीले उहाँलाई आफूसित भोजन गर्न निकै पटक आग्रह गरे। त्यसैले उहाँ ती फरिसीको घरभित्र पसेर खान बस्नुभयो। ३७ अनि हेर, पापीनी भनेर सहरभरि चिनिएकी एउटी स्त्रीले उहाँ ती फरिसीको घरमा खान बस्नुभएको छ भनेर थाह पाई र सङ्गमर्मरको भाँडोमा सुगन्धित तेल लिएर आई ३८ अनि उहाँको पछाडि पाउनजिकै उभिई। त्यसपछि रुँदै उहाँको पाउ आँसुले भिजाउन र आफ्नो कपालले पुछ्न लागी। साथै, उसले उहाँको पाउमा चुम्बन गरी र सुगन्धित तेल घसी। ३९ यो देखेर उहाँलाई निम्तो दिने फरिसीले मनमनै यसो भने: “यदि यी मानिस भविष्यवक्ता हुँदा हुन्‌ त यिनलाई छुने यो स्त्री को हो र कस्तो खालकी हो भनेर यिनलाई थाह हुनेथियो, किनकि यो त पापीनी हो।” ४० तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “सिमोन, म तिमीलाई केही भन्न चाहन्छु।” तिनले भने: “गुरुज्यू, भन्नुहोस्!” ४१ “कुनै एक जना साहुका दुई ऋणी थिए; एक जनालाई पाँच सय दिनार* र अर्कोलाई पचास दिनार ऋण लागेको थियो। ४२ ऋण चुक्ता गर्न तिनीहरूसित केही नहुँदा, तिनले ती दुवैलाई खुला मनले माफी दिए। अब भन त, ती दुईमध्ये कुनचाहिंले त्यो साहुलाई बढी प्रेम गर्नेछ?” ४३ सिमोनले जवाफ दिए: “मेरो विचारमा जसलाई तिनले बढ्ता माफी दिए उसैले।” उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमीले ठीक भन्यौ।” ४४ त्यसपछि उहाँ त्यस स्त्रीतिर फर्कनुभयो र सिमोनलाई भन्नुभयो: “के तिमी यस स्त्रीलाई देख्दैछौ? म तिम्रो घरभित्र पसें तर तिमीले मेरो खुट्टा धुनलाई पानी दिएनौ। तर यस स्त्रीले भने आफ्नो आँसुले मेरो खुट्टा भिजाएर आफ्नो कपालले पुछी। ४५ तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ तर यस स्त्रीले भने म भित्र पसेदेखिनै मेरो खुट्टामा चुम्बन गर्न छोडेकी छैन। ४६ तिमीले मेरो टाउकोमा तेल घसेनौ तर यस स्त्रीले मेरो खुट्टामा सुगन्धित तेल घसी। ४७ म तिमीलाई भन्छु, उसका पापहरू धेरै भए तापनि ती क्षमा भएका छन्‌, किनकि उसले धेरै प्रेम गरी। तर जसलाई थोरै क्षमा दिइन्छ, उसले थोरै नै प्रेम गर्छ।” ४८ तब उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो: “तिम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्‌।” ४९ यो सुनेर उहाँसित खान बसेकाहरूले मनमनै यस्तो सोच्न लागे: “पापहरूसमेत क्षमा गर्ने यो मानिस को हो?” ५० तर उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो: “तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ; शान्तिसित जाऊ।”
^ लूका ७:२ * वा, “सय जना सिपाहीको नाइके।”
^ लूका ७:४१ * दिनार ३.८५ ग्राम तौल भएको चाँदीको रोमी सिक्का हो।